Ebee ka ilele usoro 1 maka n'efu na 2021 | Gam akporosis
Ebee ka ilele usoro 1 maka n'efu na 2021
Ignacio Lopez | 19/04/2021 22:00 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ebe ọ bụ na a naghịzi agbacha ọsọ agbụrụ Formula 1 n'efu, ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ nhọrọ efu iji hụ usoro 1, nkasi obi na ụlọ ha, na-enweghị ịbanye n'ụlọ mmanya, ịkụ nzọ ... Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara ma enwere ụzọ ọ bụla iji mee ya, a na m akpọ gị ka ị gaa n'ihu na-agụ.
N'ime afọ 2021, ndị nnọchi anya Spanish na-abụ Fernando Alonso (Alpine - Renault) onye laghachiri na Formula 1 mgbe o merisịrị n'asọmpi abụọ, Carlos Sainz (Ferrari) yana ndị Mexico Serio Pérez - Checo (Red Bull - Honda). Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata esi lelee F1 2021, M na-agba gị ka ị na-agụ.
1.1 Etu esi lelee F1 2021 na mkpanaka ya na DAZN
3 F1 TV Pro na F1 TV Nweta
3.1 Etu esi lelee F1 2021 na mkpanaka ya na F1 TV Pro
4 RTVE kwụsịrị
5 Hụ F1 site na nri satịlaịtị
6 Lelee F1 site na IPTV
6.1 Chọọ ndepụta IPTV
8 Gee ntị na usoro 1
9 F1 na Virtual Adị
10 Ọrụ ndị na-anaghị arụ ọrụ ilele usoro 1
Ikike mgbasa ozi nke usoro 1 maka 2021 na gafere afọ a na DAZN, usoro ikpo okwu vidio na-asọ asọ, nke ọtụtụ na-akpọ Egwuregwu Netflix.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ya na ikpo okwu na-enye ya, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe kachasị atụ aro site na ịnye anyị, na mgbakwunye, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmemme egwuregwu mbụ na ịnwe ya site na ngwaọrụ ọ bụla, ma ọ bụ telivishọn, kọmputa, mbadamba, mobile ...
Ndị nkọwa ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka Movistar + F1, ikpo okwu nke ya na-ekenye ikike (afọ gara aga ha nọ naanị maka ikpo okwu a) ma anyị Antonio Lobathey Cristobal Rosaleny ya na Nira Juanco bụ onye so na ndị na - ekwu okwu mgbe Antena 3 nwere ikike na Spain.
Na mgbakwunye na Formula 1, nwekwara ikike Moto GP, ya mere ọ bụrụ na egwuregwu egwuregwu na-amasị gị, naanị maka euro 99,99 kwa afọ ma ọ bụ euro 9,99 kwa ọnwa, ị nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu abụọ na mgbakwunye tennis, basketball, asọmpi bọọlụ (Copa del Rey, Premier League…) Moto2, Moto 3, WTA, Eurosport 1 na 2…
Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ikpo okwu ahụ, i nwere ike ime ya kpamkpam free 1 ọnwa, ya mere, ọ bụ ohere magburu onwe ya ịhụ F1 2021 n'ụzọ dị iche, ebe ọ bụ na mgbasa ozi niile, dịka nke gara aga, dị n'elu ikpo okwu.
Etu esi lelee F1 2021 na mkpanaka ya na DAZN
Dịka m kwuru n'elu, n'adịghị ka Movistar F1, DAZN na-enye anyị, dị ka ezigbo ọrụ iyi egwu nke dị ọnụ, ngwa nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya niile dị n'elu ikpo okwu, ma ọ dị ndụ ma ọ bụ na-egbu oge, site na ngwaọrụ mkpanaka anyị, ọ bụrụ ama ma ọ bụ mbadamba.
Ngwa DAZN dị maka gị budata n'efu ma choro ndenye aha ugwo iji nwee ike iji ikpo okwu.
DAZN: Egwuregwu Live
Ọ bụrụ n’ị nwekwara iPhone ma ọ bụ iPad, ị nwere ike budata ngwa DAZN site na njikọ a.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, iji nwee ike ịnụ ụtọ Formula 1 na Spain, amanye ndị ọrụ ka ha gabiga mgbanaka Movistar, bụ onye nwere ikike a na-ekewaghị ekewa, n'agbanyeghị ụgwọ dị elu nke ụlọ ọrụ ahụ, ego a na-akwụtụbeghị ma ọlị.
N'ụzọ dị mma, n'afọ a, iche na Spain agafeela na usoro DAZN, agbanyeghị, Movistar na-aga n'ihu na-enye ma Formula 1 na Moto GP, site na channelụ DAZN 1 (pịa 59) na DAZN (pịa 60).
Ọ bụrụ na otu n’ime ihe gbara ọkpụrụkpụ mere ị ga-eji debe Movistar bụ Usoro 1, ị ga-aga n’ihu na-eme nke ahụ n’enweghị nsogbu, ya bụ, ọdịnaya niile ọ na-agbasa. Ọ bụ otu ihe anyị nwere ike ịchọta site na DAZN, gbakwunyere nkasi obi nke ikpo okwu a na-enye anyị mgbe anyị chọrọ iwepu aha mgbe anyị chọrọ.
F1 TV Pro na F1 TV Nweta
Onye nwere ikike F1 zuru ụwa ọnụ dị n'aka Liberty Media. Companylọ ọrụ a na-enye ndị ọrụ niile ohere ụzọ abụọ iji soro agbụrụ n'oge: F1 TV Pro na F1 TV Nnweta.
Mgbe mbụ na-enye anyị ohere ndụ mgbaàmà na niile data metụtara ọrụ, nhọrọ nke abụọ na-enye anyị ozi gbasara agbụrụ, ọ bụghị ihe oyiyi.
N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ, F1 TV Pro adịghị site na smart TV ngwa, ma enwere ike ịnweta ya naanị site na ihe nchọgharị. Ọ bụrụ na mba gị usoro 1 adịghị na DAZN, nke a bụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ kachasị mma dị.
Etu esi lelee F1 2021 na mkpanaka ya na F1 TV Pro
N'ịbụ onye nwe ikike nke ụwa niile nke usoro 1, dị ka atụ anya ya, anyị nwekwara ikike nke ịnụ ụtọ F1 site na ama ma ọ bụ mbadamba nkume ebe ọ bụla anyị nọ site na ngwa ngwa ya, ngwa nke, dị ka DAZN, chọrọ ndenye aha.
Developer: Eke Otu Digital Media Limited
Anyị nwekwara ike ịchọta ngwa maka Apple TV, iPhone na iPad Ọzọkwa maka Amazon Fire TV Stick, ngwaọrụ afọ na Chromecast.
N'ihi ngwa F1 TV, anyị nwere ohere ibi ndụ F1, F2, F3 na Porsche Supercup agbụrụ, na mgbakwunye na oge telemetry, agbụrụ na ọkwọ ụgbọ ala, replays, oge kachasị mma, nhazi ndụ ...
Tupu Formula 1 ghọrọ azụmahịa nke na-akpali ọtụtụ ijeri euro kwa afọ, anyị pụrụ ịnụ ụtọ ya site na Spanish ọha telivishọn.
N'agbanyeghị eziokwu na ugbu a naanị ụzọ iji nwee ọ enjoyụ na F1 bụ site na ịlele, ọ nwere ike bụrụ na, dịka ọ dị na afọ ndị gara aga, Catalan Grand Prix, nke na-eme na May 9, ọ bụrụ na ọ dị site na Teledeporte, ee, egbu oge.
Hụ F1 site na nri satịlaịtị
Nhọrọ ọzọ bụ iji a Efere satịlaịtị na-esote onye nnabata satịlaịtị na agbasa ozi n'èzí. Naanị mana ọ bụ na ọtụtụ ọwa na-agbasa n'asụsụ ndị ọzọ, belụsọ maka ọwa ABC nke Puerto Rico.
Ọbụlagodi, dị ka ihe oyiyi ahụ dị mkpa, ọ bụrụ na ị nwere nri satịlaịtị na onye na-anabata ọwa mgbe ahụ anyị na-egosi ndepụta na ọwa niile na usoro mgbasa ozi 1 na-emeghe na n'efu na iwu.
Spanish Spanish ABC Puerto Rico
Inglés Network Iri Australia
Inglés Ọwa 4 UK Ireland
Inglés Channel 4 United Kingdom
Inglés ABC United States
Frances TF1 Francia
Frances TMC Francia
Portuguese Globo Brasil
Azerbaijani Idman TV Azerbaiyán
Chinese Mandarin CCTV-5 China
Kantọn Egwuregwu Guangdong China
Persa MBC Peshia Iran
Persa Irib Varzesh Iran
Arabic / Peshia MBC Etiti ọwụwa anyanwụ
Ruso Egwuregwu TV Rusia
Lelee F1 site na IPTV
Usoro 1 abụrụla ọrụ na-akwụ ụgwọ n'ọtụtụ mba, agbanyeghị ọ dịghị n'ime ha niile. Dịka ọmụmaatụ, na UK, a na-agbasa agbụrụ F1 niile na ikuku, yabụ ị ga-agbanye TV ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ya na-enweghị akwụ ụgwọ otu euro.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ma ọ bụ na ị chọghị ịkwụ ụgwọ maka Formula 1, ihe ngwọta dị mfe na n'efu bụ site na ndepụta IPTV na ngwa dị ka VLC, Kodi ... Anyị nwere ike ịchọta nsogbu ahụ mgbe ọ na-abịa n'ịchọta ndepụta nke ọwa Bekee IPTV, mana ọ bụrụ na anyị chọọ ntakịrị, ọ naghị esiri ya ike ịchọta ya.
Site na ndepụta ndị a, anyị nwekwara ike ịchọta ọwa chọrọ ndenye aha iji nweta ọrụ a, depụtara nke a n'ọtụtụ ọnọdụ ha anaghị enwere onwe ha na na mgbakwunye, ha anaghị ekwe nkwa n'oge ọ bụla na ha ga-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Chọọ ndepụta IPTV
Agbanyeghị na ọtụtụ IPTV depụtara na anyị nwere ike ịchọta na ịntanetị na-enye ohere ịnweta ọwa ọha, anyị nwekwara ike ịchọta ohere ịnweta ọwa. Site na Androisis, anyị anaghị akwado ụdị ndepụta a.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọọ IPTV ndepụta iji hụ mgbasa ozi nke ọwa na-agbasa n'èzí (na ngalaba gara aga, ahapụrụ m gị ndepụta) Usoro 1, ị ga - chọọ na Google «IPTV depụtara» ma ọ bụ «IPTV ndepụta», iji chọta nsonaazụ n'asụsụ ndị ọzọ.
Wiseplay bụ otu n'ime ngwa ndị kasị ochie na ahịa maka nweta ndetu IPTV. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụdị azụmaahịa ya agbanweela iji mejuputa ọkpụkpọ mgbasa ozi nke na-egwu ụdị ọdịnaya ọ bụla na ihe nchọgharị weebụ, mana ọ na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ịlele ndepụta IPTV.
Ngwa ahụ anaghị agụnye ụdị ndepụta ọ bụla, ya mere, anyị ga-abanye na ịntanetị iji chọọ listi ọkpụkpọ ebe ebe ọwa ebe agbasa ozi na Formula 1 dị, ọkachasị n'èzí, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike ịchọta ndepụta ebe a na-enye ohere ịnweta Movistar F1, na-akwụghị ụgwọ.
Ọ bụ eziokwu na na Storelọ Ahịa Play anyị nwere ọtụtụ ngwa iji lelee ọwa na usoro a, Wiseplay bụ otu kachasị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kacha mma. Ọ dị maka gị budata n'efu Ọ gụnyere mgbasa ozi, mgbasa ozi anyị nwere ike wepu site na ịzụta ngwa n'ime ngwa ebighi ebi.
Ngwa ọzọ na-adọrọ mmasị lee ọwa IPTV Ọ bụ site na ngwa IPTV, ngwa anyị nwere ike ibudata n'efu, ọ gụnyere mgbasa ozi mana, dị ka ngwa ọ bụla nke ụdị a chọrọ ịnọ na Playlọ Ahịa Play, ọ naghị etinye ụdị ndepụta ọ bụla.
Photocall.tv bụ ibe weebụ nke na-enye anyị ohere ịnweta site na ihe nchọgharị, site na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka, gaa ọtụtụ puku ọwa mmiri na-enweghị ikuku si n'akụkụ ụwa niile, yabụ ọ bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ maka ndị niile na-enweghị efere satịlaịtị nke ha ga-esi gbanye chanel nke mba ndị dị nso ebe F1 na-agbasa n'ikuku.
Site na Photocall.tv, anyị nwere ohere ABC, ọwa na-agbasa ozi F1 bi na United States, Channel 4 nke na-agbasa usoro 1 bụ n'efu ka ọ bido na United Kingdom na Ireland.
Na gụgharia àgwà dị ezigbo mma, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe ọ bụla karịa ihe mgbaàmà sitere na netwọk telivishọn nke anyị nwere ịnweta ozugbo na weebụsaịtị ya.
Ibe weebụ a kwa na-enye anyị ohere ịnweta ọtụtụ puku ọdụ redio si n'akụkụ nile nke ụwa, yabụ, ọ bụkwa nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbaso agbụrụ ahụ na-ebi na-enweghị ahụ ya.
Gee ntị na usoro 1
Ọ bụ ezie na redio bụ ụzọ kachasị mma iji nwee egwuregwu ọ bụla, ọ bụrụhaala na anyị enweghị usoro ọzọ n'akama ọ bụ ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya iburu n'uche, ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka agwa anyị n'oge niile nke ọsọ ahụ.
Taa, o siri ike ịchọta smartphone nwere mgbawa redio FM, agbanyeghị, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na anyị ejiri ngwa nke ọdụ ọ bụla na-agbasa agbụrụ dị ugbu a: Cadena SER, Onda Cero, Cadena COPE na Radio Marca.
F1 na Virtual Adị
Ezigbo eziokwu ahụ bụ ọdịnihu, ọ dighi onye nāgọnari ya ọ bụ ezie, maka oge ahụ, ọ ka nwere ọtụtụ ụzọ ọ ga-aga. A na-achọta azịza na-adọrọ mmasị iji nwee ọ Fụ na F1 n'ụzọ dị iche kpamkpam Nrọ VR otu ikpo okwu Spanish nke na - enye gị ohere ịnụ ụtọ agbụrụ F1 dị ka a ga - asị na anyị nọ ebe ahụ.
Nrọ VR na-enye nweta vidiyo nke ogo 360 site na iko ihe eji eme ihe site na ndi emeputa obula, nke n’eme ka anyi tinye onwe anyi n’agbụrụ, na-agagharị na paddock, ememe ndị a na-eme n’elu ikpo okwu, na ntanetị mmalite ...
Ọrụ ndị na-anaghị arụ ọrụ ilele usoro 1
Na Jenụwarị 2021, weebụsaịtị na ngwa gam akporo n'onwe ya kwụsịrị ịrụ ọrụ kpamkpam. Kemgbe ụbọchị ahụ, ngwa ahụ ọ baghị uru ọ bụla, ya mere adabaghi ​​n'ọnwụnwa nke na-achọ ya na weebụsaịtị (gọọmentị na-emechi emechi) n'ihi na naanị ihe ị ga-enwe ike ịchọta bụ nje, trojan, malware ma ọ bụ yiri nke ahụ na-emetụta ngwaọrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ebee ka ilele usoro 1 maka n'efu na 2021
Etu esi etinye wijetị nke Google na gam akporo
Ngwa 9 kachasị mma maka ịlụ nwanyị